P oghere Grid board baord extrusion igwe - China Qingdao Suke Machinery
Eyi oghere Board Production extrusion Machine Extruder Line igwe OKWU: The eyi oghere osisi mmepụta akara bụ ndị pụrụ iche ngwá n'ihi extruding PC oghere okporo osisi. Na-eji ire ụtọ mooth na ọcha elu, mara mma anya na nsogbu ndị na-eguzogide. Plastic oghere Grid Board extrusion Line na ọtụtụ-eji na-ewu, nkwakọ ngwaahịa na mma ọrụ etc.The technology nke oghere mpempe akwụkwọ anwụ co-extrusion oriri ngọngọ na-UV + PC + UV, UV + PC oghere mpempe akwụkwọ nwere ike ịzọpụta 30% UV na ...
Eyi oghere Board Production extrusion Machine Extruder Line
The eyi oghere osisi mmepụta akara bụ ndị pụrụ iche ngwá n'ihi extruding PC oghere okporo osisi. Na-eji ire ụtọ mooth na ọcha elu, mara mma anya na nsogbu ndị na-eguzogide. Plastic oghere Grid Board extrusion Line na ọtụtụ-eji na-ewu, nkwakọ ngwaahịa na mma ọrụ etc.The technology nke oghere mpempe akwụkwọ anwụ co-extrusion oriri ngọngọ na-UV + PC + UV, UV + PC oghere mpempe akwụkwọ nwere ike ịzọpụta 30% UV na n'elu.
Nke a extrusion akara mejupụtara otu ịghasa extruder, gbazee-mgbapụta, haịdrọlik nyo inyerịta unit, oghere mpempe akwụkwọ na-anwụ isi, agụụ calibrating table, mbụ bufee anya igwe, oven, corona n'imeso unit, jụrụ table, abụọ bufee anya igwe, trimming na ogologo-biri ịcha nkeji na stacker etc
Extruder nlereanya Φ100 Φ120
Product obosara 1300mm 2100mm
Motor ike 110kw 132kw
Previous: PC oghere Grid board extrusion igwe
Osote: Eyi Building Template Board Production Line
Plastic oghere Board extrusion Line
Ịkwanyere Free ụfụfụ Board Production Line
Ịkwanyere jikọrọ ọnụ ụfụfụ board mmepụta akara